Kusvira Mai Vemukadzi haa pakaipa!!! – Makuhwa.co.zw
Ndakafunga kuti sezvo tisirikuwirirana nemukadzi , zvirinani ndimboenda kumba kwavo ndonoudzawo amai vake nyaya yedu zvimwe vangandipangawo mazano, ndakarova mota ndokuenda ku Borrowdale kuden kwana ambhuya. Ndichingosvika ndobva ndaitawo mahwekwe navo pa gate vachisvikawo nemota yavo
Hes Masasi mwanangu, ndiwe hako? Kwakanaka here kwawasvika rungwana ngwana soo?paka mota yako mushe uuye uzondibatsira kutakura grocery tiise mumba. Zvakanakai mhamha, ndakabva ndapaka mota yangu zvakanaka ndokuenda kunotora zvinhu zviya mapaper begs acho tichibatsirana kuendesa muden, ma parents emkadzi wangu vanozviita mavhet kuda zvekudaidzana nemazita what what munongoiziya nyaya yacho
Tapedza takagara pasi ndobva vauya ne drink ndokugara zvedu paye. She started to ask, asi nhasi muri off here sei musirikubasa? plus face yako irikurakidza kuti pane zvinenge zvirikunetsa, chii mwanangu? kasi hamusi kuwirirana na mai D kumba uku? kana iriyo nyaya yacho, chete makatoranawo namai D varimwana mudiki asi by now mungadai madzidzana, chete dzimwe nguvao mai D vanoita semwana mudiki. Ndakaramba ndakanyarara zvangu nekuti zvaisaita kuti nditaure zvakawanda nekuti mwana wavo anyway, mwanangu mazuva ano hazvisi zvekunyara nekuti unofira munoyo, ndiudze haisi nyaya yebonde here irikunetsa kumba uku, ndoziya hangu handisi tete asi ndiri amai vake iwe unogona kundiudza hako, ndirikuzviona neface yako kuti zvinenge zvisina kumira mushe, vakadaro amai vachindibata chidya changu vakanditarisa mumaziso.
Hana yangu yakarova kuti ko amai vapindwa neiko, apawo chaiva chokwadi ndonyaya yainetsa painge patoo ne about a month tichinetsana pasina kana bonde mumba, zemo ranga rakandikiyawo sei?
Ah mha.. nda ndaa, ndakakakama apo amai pavakandibata chidya mboro yangu yakasimuka ndobva yamira zvekumira zviya, and ne trouse randaiva ndakapfeka yaibva yanatsoonekwa, worse pavaida kubvisa ruoko rwavo ruya vakabva varupfuudza nepamusoro wayo chaiwo, eish anga ari mahwan1.
Kapfungwa kakauya kuti zvaakuda kuitika izvi kana Mai D vakandibata either vaizvisungirira or taidirwa mafuta anopisa, ko ivo mdhara worse ndaiiswa demo, asi mboro inopa vanhu zvivindi veduwee,
“Yowee, zvayatomirazve, nhai mwanangu zvairikunzwikwa nemubrugwa mese umu? Mai D inga agere zvake askana”, vakadaro vachii puruzira, ndakanyebera kuda kuvabvisa ruoko asi ndainge ndaakutonakidzwa nazvo!
Amai vakabva vauya ndokubva vaakundizevezera munzeve vachibata bata mboro yangu, “Masasi mwanangu, usatombotya zvako, atezvara vako vakaenda ku China vana vese vari kuchikoro and musikana webasa ndakamu fire saka relax, no one will ever know this kubva zvavakaenda kuChina vatezvara vako ndiri panzara isingaite ndatoo nenguva ndisina kumbosvirwa ufunge zvako mkwasha”, Ndanga ndasuwa beche apa Mai D always had excuses and now beche was in front of me, i had no choice. Ndanga ndisina basa nazvo kuti beche nderani! Ndakanzwa zemo rangu rese kusimuka zvekuti ndainge ndaakungoda kuita mbutu yekutsemura tsemura nemboro.
Vakaisa ruoko mubhurugwa mangu ndokuburitsa mboro yangu yese and pasina warning mukanwa mavo bvojo. Ndakanzwa parere moyo and ndakapotsa ndatunda instantly. Vakanditarisa paFace ndokuti… “Mwana wangu Mai D anombokudya mboro here sezvizvi?” Vakadaro vachitora yese kuisa mukanwa. Haa ndakanakirwa mhani zvekuti ndiambhuya musango beche ibeche.
Ndakati ndinganonoka kubasa ndokusimuka ndichiita take over and for sure vanga vasuwa mboro. Ndakati ndichingoisa mboro mubeche kudai aah imi munhu akatunda ka1 zvekuti ndakatombotya kuti neniwo ndichatundawo. But semunhu ainge asina kumbotunda ndakabva ndatanga kunatsokoirawo ko ndaisada kunzi handiziye zvandinoita ndosaka ndichinetsana nemukadzi, ndakaita sendichabuda shavi rekusvira ndakavatamba rhumba takarara pafloor kudaro zvekuti imiii?, plus munongoziya zvekubira zvazvinoita, ndakavakwesha ambuya asi manje kutunda kwaive kwaakuda kuti netsei, ndakavasandura, ndobva ndavataridzisa kumusha kwavo kuti vaite sevanononga ini ndobva ndaishwetedzera neshure, mai yakaedza kuetedzera rhythm yangu asi manje ini nechikara power rainge rakawandisa, vakaedza kukoirira back asi zvakashaya basa, nhai baba D, mondiuraya nekunakirwa kan nhai mukwasha wangu, yuwiiii maiweeeeee ndonakirwa zvangu kan nhai askana,oooooooooh, ndakarova mhata kusvika ndaakunzwa tumwe tunyama tunenge tuzvikwama ndofunga ndochibereko nekuti twaitiza tiza apa kutugumha ndokwaitonaka worse saka ndaikoira faster kuti nditubate chete
Pasina nguva ndakanzwa huronyo hwese hwaakuuya manje apa ambuya vanga vaakungobvundisa makumbo vakandibata matako ne one hand rumwe rwaka batirira kuti vasa donhe, tsssssssssa tssaaa tsaaa……,uuuhhmmmmaa aaaahaaaaaa uiiiuiiii yahhhh, ndakadaro ndichitundira mukati kati maambuya, zvese zvekutya kubatikidzwa zvanga zvapera nekuda kwebeche, ndakavawira kumusana ndobva tazorora takadaro. Ndakavhunduka ndanzwa mai vakurova ngonono ipapo ndikaziva kusti shuwa ambhuya vasvirwa!
Related Topics:Kusvira Mai Vemukadzi haa pakaipa
Drama as mother humiliates her son in public over his choice of wife
Kusvira Mai Vemukadzi haa pakaipa kunakirwa kwacho is danger!!!